QOYSKA IYO NOLOSHA | GURIGA HAWEENKA | Page 4
Home » QOYSKA IYO NOLOSHA (page 4)
Waa tee magaalada ay khatarta ugu badan kala kulmaan haweenka?
Caasimadda dalka Masar ee Qaahira ayaa lagu sheegay inay tahay magaalada ugu khatarta badan ee ay halisaha kala kulmaan haweenka.
Daraasaddan ayaa lagu helay ra`yi ururintii ugu horreysay ee caalami ah ee laga sameeyay waxa ay haweenku kala kulmaan magaalooyinka, taas oo laga qaaday in ka badan 10 milyan oo qof.
Ra`yi ururintan ayaa laga sameeyay 19 magaalooyin waaweyn halkaas oo khubarrada arrimaha haweenka la weydiiyay sida haweenka looga difaaco tacaddiyada jinsiyadeed.
Magaalada London ayaa noqotay magaalada weyn ee u roon haweenka, waxaana soo raaca magaalooyinka Tokyo oo Japan ah iyo Paris oo Faransiiska ah.
Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay in haweenku ay haatan door weyn ku leeyihiin bulshada London, ayna ka qayb qaataan sida adeegyada dadweynaha, fanka, ganacsiga iyo siyaasadda.
Dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ee magaalada Qaahira ayaa takoorka haweenka ay la kulmaan u aaneeyay caadooyinka qarniyo jirsaday ee Masar ka jira, iyagoo sheegay in tallaabo walba oo horumar ah oo lagu caawinayo haweenka ay aad u adagtahay.
Waxaa sidoo kale xaddidan fursadaha ay haweenku u helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan, dhaqaalaha iyo waxbarashada.
Shahira Amin, oo ah weriye can ah oo Masar u dhalatay ayaa sheegtay in wax walba oo magaalada ku saabsan ay ku adagtahay haweenka, sida xitaa inay waddooyinka maraan oo u sababi karta inay la kulmaan tacaddi.
Magaalada Karachi ee dalka Pakistan, Kinshasa oo ku taalla Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo caasimadda Hindiya ee Delhi ayaa ku soo xiga Qaahira, sida daraasadda lagu sheegay.
Magaalooyinka Delhi iyo magaalada Brazil ku taalla ee Sao Paulo ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu daran ee ay haweenku kala kulmaan tacaddiyada jinsiyadeed iyo kufsi.
Inkasta oo magaalada Delhi lagu xusay daraasadda haddana waxaa ka jira shuruuc adag oo ku wajahan dembiyada kufsiga kaddib markii sanadkii 2012 ay koox burcad ah haweeney ku kufsadeen gudaha bas ay saarneyd, kiiskaas oo caro sababay.
DARAASAD: Qaabkee Ayaad Ku Ogaankartaa Xilliga Uu Lamaanahaaga /Lamaantaada Been Kuu Sheegayo/Sheegeyso(Yaan Lagu Gaadin Maanta Kadib Ee Calaamadahaan Iska Jir)
Admin 2 days ago	Ila tali, Lamaanaha, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Daraasadaan waxaa ay gaar u tahay lamaaniyaasha isjecel iyo kuwa dhexmaraya xiriirka jaceyl, mana ahan daraasad dagaal ee waa mid xoojineysa xiriirka jaceyl ee ka dhexeeya lamaaniyaasha.
Waxaa macquul ah gabaryahay ama wiilyahoow in gacalisadaada/gacaliyahaaga aad isweydiin maalmo, laga yaab todobaad, mashquulka jira dartee balse sheekada isweydiinta mudan ayaa ah qaabkee ayaad ku ogaankartaa marka uu lamaanahaaga been kuu sheegayo? Waliba adigoo fiirinaya calaamadahaan.
Waxaa macquul ah inay kugu adkaadaan calaamadahaan sida aad kusoo saarto balse waxaad tahay ogow qof xiriir jaceyl waalaya waadan ogaankartaa sababtaas, keliya waxaad raacdaa tilmaamaha hoose.
Wiilasha Marka Ay Been U Sheegayaan Gabdhaha Xiriirka La Sameeynayaan.
Calaamado badan ayaa lagu ogaanayaa wiilasha xilliga ay been u sheegayaan gabdhaha waxaana kamid ah waxyaabaha lagu ogaankaro.
Judi James oo kamid ah aqoonyahanada kunool UK ayaa sheegay in calaamado badan ay jiraan kuwaas oo lagu ogaado wiilasha xilliga ay la haasaawayaan gabdhaha , waxaana kamid ah.
1-Inuu Badiyo Calaacalka:Tusaale si uu qanciyo gacalisadiisa waxaa uu mar walba ku dadaalaa inuu calaacalo oo ereyo naxriis badan ku dhoho gabadha waxaana kamid ah…(Mcnto , Qaali, Xabiibtii .. iskakeey cafi..iyo ereyo lamid ah.
2-Gariir:Inta badan waxaa laga dareemayaa gariir wiilasha xilliga ay been u sheegayaan gabdhaha ,waxaana macquul ah inuu fadhiga ama istaago uu awoodi waaye , keliya waa inuu ku mashquulsan yahay qaabkii uu ku qancin lahaa lamaantiisa.
3-Inuu Dalbado Raali Gelin Badan:Wiilasha Inta badan waxaa ay dalbadaan in la iska cafiyo marka ay been sheegayaan.
Qaabkee Ayaa Lagu Ogaadaa Gabadha Xilliga Ay Been U Sheegeyso Wiilka Ay Saaxiibka La Tahay..
Arinta ugu muhiimsan ee gabdhaha lagu ogaado xilliga ay been sheegayan waaa inaad aqrisaa dhaq-dhaqaaqa ay xilligaas sameeynayaan.
1-Indhaha Kuguma Eegikarto:inta badan gabdhaha marka ay been sheegayaan indhaha kuuma dhameeynkaraan , sidaas darteeda waxaa lagaa doonayaa inaad ogaato marxalada ay ku jirto.
2-Dhaq-dhaqaaq ma joojinkarto:Ma ahan micneheeda inay so socoto balse waxaa ay mar walba dhadhaqaajisaa dhanka bidix ee garabkeeda.
3-Aamusnaan:inta badan gabdhaha waa ay iska aamusaan marka ay been sheegayaan , sababtoo ah waxaa ay keliya ka hadlaan niyada ama gudaha.
Fariin Jaceyl :Aduunka Wax Free Ah Ma Jiro Xitaa SMS-keyga Qiimihiisuna Waa Dhoola Cadeyntaada Iyo Kuwo Kale…………..
Admin 2 days ago	Lamaanaha, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
1-Aduunka ka jirto wax bilaash ah oo aan qarash aheyn oo uu ku jiro SMS-kaan aan hadda ku soo dirayo , hadaba waxaan go`aan ku gaaray in aan kugu soo dalaco qiimo ku aadan SMS-keyga qiimahana waa Dhoola Cadeyntaada( Waan U Xiisay Dhoola Cadeyntaada Sixirka Ah)
3-Cilmi baaris ayaa cadeysay in Sonkorta ay milmeyso marka biyaha lagu shubo, Fadlan banaanka ha u bixin marka uu roobka da`ayo maxaa yeelay waxaad tahay macaanka aduunka
4-Marka la gaaro in aad qofka aad u hibeyso qalbigaada , iska xaqiiji in aad u hibeysay qof aan waligiisa dhaawaceyn qalbigaada maxaa yeelay ogaaw dhaawaca gaara qalbiyada malaah dawo iyo dayactir lagu sameeyo.
5-Waxaa laga doonayaa qeybta Police love(Booliska Jaceylka) waxaa laguu soo eedeeyay in aad xaday qalbigeyga , ogaaw kaliya waxaa kaliya laguugu sii deyn karaa damiin gaareysa 5000-oo dhunkasho Ya salaam dhunkashadaadii macaaneed ayaan u xiisay.
AQRISO Dhacdooyinkii ugu darnaa ee ka dhacay Musiibadii Zoobe… Waan hubaa waad qiiroon doontaa
Admin 3 days ago	DIINTA, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
• AXMED CARUUS AYUU AHAA
8 maalin oo kaliya ayuu ahaa caruus Axmed Sheekh Axmed oo ku geeriyooday weerarkii Muqdisho ka dhacay
Isbuucan wuxuu xaaskiisa cusub oo hada maro cad ay u saaran tahay la gali rabay todobo balse nasiibkaas uma yeelan oo waa uu geeriyooday.
• 23 SANO JIR NAJMA
Najma oo caruurta agoonta si lacag la’aan ah wax ku bari jirtay ayaa nafteeda ku weysay dhacdadii Zoobe
Wali meydkeeda lama helin, weyna iska sabreen reerkooda oo murugo ay muuqato
• CIDNA UMA MAQNA CEELNA UMA QODNA
Zakariye oo 26 sano jir ah ayaa isagana meydkiisa la waayay. Wuxuu ahaa qofka kaliya ee Qoyskiisa dhabarka saartay balse haatan reerkiisa cidna uma maqna ceelna uma qodna
• Qoys Musiibo daran ay qabsatay
Qoys dagan degmada Wardhiigley ayaa Musiibadii Zoobe ku waayay 3 wiil oo ay dhaleen iyo gabar uu qabay mid kamid ah wiilasha
– Qoyskan waa qoyska dhibaatada ugu badan ay kasoo gaartay mashaqadii ka dhacday Muqdisho
• 2 WIIL WALAALO AH OO ISLA GEERIYOODAY
Labo wiil oo walaalo ah ayaa geeriyooday oo mid kamid ah dhowaan uu qalan jabiyay. Kan kalana wuxuu lahaa goob ganacsi oo faamilkiisa uu ka masruufi jiray
• UK AYUU KA YIMID LAKIN MUXUU LA KULMAY?
Aabe Cabdullahi wuxuu ka yimid Uk si uu gabadhiisa ugala qeyb galo xafaladda qalin jabinteeda lakin taas badalkeeda wuxuu ka qeyb galay aaska gabadhiisa Drs Maryan
• GABAR 17 SANO JIR AH
Sahro macalin Axmed waxey gabadheeda oo 17 jir ah raadineeysay 3 maalin ka badan
Ugu dambeyn maanta ayaa loo sheegay in ay kamid ahayd dadkii la aqoonsan waayay ee dowladda ay aaseen
• CALAF ISKUMA LAHEEN
Duhuradii ayuu Muqdisho yimid Axmed Cabdikarin Ciyow, wuxuuna ka yimid Mareykanka si uu qoyskiisa u arko lakin isagoo ku nasanaya hotel ku yaala Zoobe ayuu geeriyooday oo nafta ay ka baxday isagoo aan reerkiisa arkin muddo 10 sano ah
• ISAGA IYO XAASKIISA WEY GEERIYOODEEN
Abukar Daahiye iyo Xaaskiisa Shaadiya oo isku dhalay 7 caruur ah ayaa kamid ah muwaadiniinta naftooda ku waayay halaagii dhacay
• 10 CARUUR AYUU DHALAY
Aabe Cabdiraxman Buraale oo dhalay 10 caruur ah ayaa isagana ruuxbaxay
– Wuxuu maalin walba ubadkiisa u keeni jiray 20 dollar balse maalinkii uu geeriyooday ilaa iyo hada caruurtaas qofna uma maqna
• FARXIYA QISADEEDA
Farxiya oo 22 jir ah, kana qalan jabisay jaamacada Simad University iyo saxibteed Sacdiya ayaa geeriyooday iyagoo ku jira tukaanka carwada dumarka
• MEYDKA NINKEEYGA AAWAY?
Hooyo hal lug naafo ka ah, wadatana 2 caruur ayaa Jowhar ka timid si ay u hesho meydka ninkeeda oo bajaajle ahaa
Lakin nasiib daro waxaa loo sheegay in lagula aasay meydad lawaayay cida lahayd, madama la aqoonsan kari waayay
• WEY SHAHIIDEEN
Luul iyo cunugeeda oo bajaaj saaran ayaa halmar gubtay 
– Cid ay qaraabo yihiin oo idaacadaha Xamar u hadlay ayaa sheegay in 2 maalin ay ku qaadatay in ay aqoonsadaan in ay tahay marxuumad Luul iyo baby geeda yar
• CABDIWALI SALAAD CASAR AYUU U SOCDAY
Abdiwali oo kamid ahaa dhalinyarada aaminsan in qof walbo dalkiisa uu aamino iyo ina adeerkiis ayaa geeriyooday xili ay ku socdeen in ay tukadaan salaadda casir
• MARYAN HOOYO AYEY RABTAY IN AY NOQOTO
Marxuumad Maryan oo hooyadeed aan la hadlay ayaa ii sheegtay in gabadheeda ay jecleed in mar uun ay aragto ubad ay iyada dhashay lakin taas ma aysan dhicin oo weerarkii Zoobe ayey ku nafweysay
• Dadkii ku geeriyooday musiibada dhacday waxey isugu jireen Aqoonyahan, hooyo, aabe, caruur, ciyaartooy, dhalinyaro iyo gabdho mustaqbal lahaa
• Waxaa laga yaabaa inaad qiirootay lakin ogow waa dareen uu alle kugu hadiyeeyay hadii aad ka qiirooto dhacdooyinkan
Waxaan idinka codsanayaa in qof walba oo qoraalkan aqriyay u duceeyo walaalaha naga shihiiday 
Allow u naxariiso, Allow janada ka waraabi. allow shuhadaa ka dhig aamin yaa rabi
Admin 4 days ago	Lamaanaha, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Ma jirto haweeney jecel in ninkeeda uu ka tago balse ogoow waxaa jira ficillo ay haweeneyda sameyso oo si weyn kaaga fogeyn kara gacaliyahaada
Hadaba shabakada arimaha qoyska Maandeeq.net ayaa ku siineysa arimo saameyn ku yeesha nolosha qoyskaada oo qaarkood laga yaabo in aadan ku baraarugsaneyn halka ay kugu hogamin karaan
* In aad joogto u dhaleceyso adiga oo aadan uga gon laheyn in aad saxdo xalna ugu hesho xaaladda uu ku jiro balse aad diiradda saareyso in aad ku dhaleeceyso halka uu kaliito.
* Madax adeeg iyo ganuunac joogto ah , in aadan dhageysan , wax waliba oo weyn iyo yar oo uu ku sameeyo oo aad ku qancin
* In Kaliya Kuu Muuqato Dhanka Maaliyadda :in aad iska indho tirto dhinacyada kale uu nolsohaada uga jiro , in aad noqoto haweeney dalab badan .
* In aad Aflagaadeyso Una Adeegsato Erayo Qalafsan : waxa ay Maandeeq ku leedahay arintaas waxa ay dileysaa dareemihiisa
* In aad ku hor qiimo tirto(bahdisho) dadka hortooda uguna muujin tix gillin
* In uu afkaada furan yahay , in aad qarineyn sirta gurigaada iyo qilaaf waliba oo idinka dhex dhaca oo aad suuqa ku shaacineyso
Ugu dambeyn in aadan siin ninka xoriyad balse aad isku daydo in aad caburiso taasina waxa ay keeneysaa in uu ka cararo
Admin 4 days ago	LOVE, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Astaamaha ay dadka oo dhami ay ka siman yihiin oo ay jecelyihiin waxaa ka mid ah in mid kastaaba uu noqdaan qof caan ah, la jecelyahay, dadkuna ay ixtiraamaan.
Arrintaasi ah iney dadku ku ixtiraamaan meel cidlo ah kama timaaddo “Xaglo laaban iyo xoolo horaa la iskugu waayay”, waxaa laga yaabaa xilliyada qaar inaad is tiraahdo dadba uma baahni xumaan iyo samaanba, waxaadse illoobaysaa inaan qofna kaligii noolaan karin, asalka dabeecadda aadanuhuna ay tahay bulshaawi.
Hadaba, waxaan idiin soo gudbineynaa 12tallaabo oo aad ku gaari karto iney dadku ku jeclaadaan kuna ixtiraamaan:
1 .Run sheeg Noqo
Dadka qaar ayaa aaminsan in xeeladaysiga iyo khiyaanadu ay yihiin wadada ugu fudud ee hor-u-marka dhanka shaqada ah lagu gaaro, mararka qaar inaad ku dallacado way dhici kartaa, laakiin guusha noocaa oo kale ah lagu gaaro ogow waa mid aan wakhti dheer sii jiri, cago badanna aan lahay. Ogow arsaaqdaada wadada ugu fiican ee aad ku heli kartaa lagu raadsadaa oo Alle SW uu raalli kaa noqonayo, maadama ay markasta kuu qoron tahay oo aaney meelna kugu seegayn.
2 .Ballamahaaga fuli
Haddii ballamaha aad ka qaaddo mucaamiishaada aad fulin waydo sumcadaada suuqa ayaa xumaaneysa, mar kasta oo aad ballamahaaga kasoo baxdo kalsoonida ay dadka kale kugu qabaan ayaa sii xoogaysaneysa, . Haddii aad aragto in ballamihii aad qaadday ay wakhtigoodii ka dib dhacayaan waa inaad macaamiishaada u sheegto. Waana halka ay Soomaalidu tihaahdo ama afeef hore yeelo ama adkeysi dambe.
3 .Khaladaadkaaga qiro
Khaladaadka inaga dhaca dartood waxaan la kulannaa fashil mararka qaar, laakiin maamulka wanaagsan waa kuwa khaldaadkooda garta oo qirta isla markaana guul u bedela, iskana ilaaliya inaaney mar dambe ku dhacin. Haddii aad dooneyso iney dadu shakhsiyaddaada si waangsan u arkaan, inaad tahay qof mas’uul ahna aad u muuqato, waxaa laga maarmaan ah inaad khaldaadkaaga qaadato oo aanad dad kale dusha kaga tuurin.
4 .Noqo qof howshiisa ka adag
Inaad howsha aad hayso u qalanto iyo kalsoonida ogow mar kasta dadku tijaabo joogto ah ayay kugu hayaan, waa halka la yiraahdo “dariskaagu waa ilaalo aan laguu diri”, dadku mar kasta way iska kaa eegayaan, dadka intooda badani waxay jecelyihiin iney la shaqeeyaan qofka ballamahooda si wanaagsan uga soo baxa, waxaa waajib ah inaad wakhigaaga si wanaagsan u ilaaliso, iskana ilaali iney ku dhaafaan shirarka, ballamaha iyo xilliyada howsha lagaa rabo oo aad ka dib dhacdo.
5 .Af xumadu waa shay aan wanaagsaneyn
Erayada fkaaga kasoo baxayaa waa iney noqdaan kuwo miisaaman, haddii aad noqoto shakhsi dadka badankoodu ay uga barteen hadallada aan wanaagsaneyn ogow cid kastaa way ku xaqireysaa oo cid ku qiimeynaysaa ma jirto, qofkaad doontaba ahawe.
6 .Khliaafka si xikmad leh ku dhamee
Soomaalidu waxay tiraahdaa “carab iyo ilko ayaa iskugu dhaw iyaguna way is qaniinaan”, sidaa darteed ha xanaaqin marka aad aragto qof ra’yigaaga ka soo horjeeda, qanci dadka kugu hareeraysan, mar kasta eego halka la iskugu imaan karo ee dadku ay ka mideysan yihiin, hadalka aad sheegaysana mar kasta xujo u raadi oo meel adag haku tiirsanaado si dadka kale ay kuula qaataan, haddii aad aragto ra’yi kaaga ka wanaagsan haka lababeyn kaas qaado oo xooji.
7 .Ka Fogow Dirdiraale-nimada
Qofka xumaan ha ka sheegin haddii uu maqan yahay iyo haddii uu joogaba, mushkiladaha idin agyaalla waxa ay doonaanba ha noqdaane, arrintaasi waxay keenaysaa inuu xiriirkiinnii burburo, mustaqbalkana waxba kama faa’ideysid oo mar kastaba xumaantu adiga ayay kugu dambeynaysaa.
8 .Noqo qof aan isla wayneyn
Mar kasta ma saxnaan kartid, wax kastana uguma fiicnaan kartid, qof kasta wax un baad ka kororsan kartaa, kalsooniduna kama dhalato inaad wax kasta aad ku fiicnaato, taa bedelkeeda waxaa sarreynta laga helaa is dhuldhigga iyo inaad dadka kale ixtiraamto.
9 .Noqo qof caqligiisu furan yahay
Noqo qof markastaa ay wax ka maqan yihiin oo ra’yiga cusub oo ka sata inuu dhageysto diyaar u ah, isku day inaad barato wax kasta oo cusub, arrinti waxay kobcineysaa caqligaaga iyo xiriirka aad dadka kale la leedahay.
10 .Dadka kale Tusaale Fiican u noqo
Dadka kale la wadaag fikaradahaaga, riyooyinkaaga iyo yoolka aad tiigsaneyso, iyadoo ula jeedadu tahay iney wax kaa kororsadaan ee aaney ahayn faan iyo wax la mid ah. Dhiirigeli dadka kale si ay u gaaraan hadafkooda nolosha una xaqiijiyaan hor-u-markooda.
11 .Cadowgaaga si u qalanta ula hadlay
Halkan waxaa soo galeysa maahamaahda Soomaaliyeed ee oraneysay “Cadowgaaga caano mac ayaa la siiyaa”, waxaa dhici karta in qofka cadowga kuu arkaa uu si xun kuula dhaqmo oo uu dadka kale kaaga sheekeeyo waxyaabo aan wanaagsaneyn, markay arrintaasi ku soo gaarto hab dublumasiyadeed waa inaad ula dhaqantaa, mararka qaar waa inaad naftaada wanaag ka sheegto, waa marka aad aragto in cadwogaagu ku sumcad dilayo, waa halka ay Soomaalidu tihaado “haddii lagu sheegana waa la isa sheelaa, haddii lagu sheelana waa la isa sheegaa”.
12 .Dadka kale muhiimad gaar ah sii
Dadka kale marka ay garab kaaga baadaan waa inaad is garab taagto, gacmaha ha ka laaban oo ha dhihin maxaa iga galay?, ugu dambeyn aadane ayaad tahay, adigana naftaada dhibaato ayaa kusoo gaari karta oo waxaad u baahaneysaa qof ku garab istaaga.
Admin 4 days ago	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Jilaayaal caan ah ayaa soo maray nolo kala duwan,waxaana dhamaantooda ay hada kamid yihiin kuwa ugu caansan aduunka marka loo fiiriyo shaqada ay qabanayaan.
Bollywood-ka atariishooyinka iyo atooriyaasha waxaa ay soo mareen marxalad adag oo noloshooda ku saabsan ,waxaana sidoo kale jirta in wax badan ay ka bedeleen sidii ay horey ahaayeen oo aan ula jeedo inta aysan noqon jilaayaal.
Hadaba waxaan idin heeynaa Jilaayaal xiriir dhexmaray balse markii dambe oo ay caan noqdeen iska iloween shaqsiyaadka ay xiriirka jaceyl la sameeynayeen waxaana jilaayaashaasi kamid ah:-
1-Deepika Padukone Iyo Nihar Pandya
Labadaa shaqsi ayaa dhexmaray jaceyl aan caadi ahayn , gaar ahaan Deepika ayaa hada ka caansan Nihar ,waxaana jaceylkooda keliya uu ku koobnaa inta ay caan ku noqoneyso Deepika.
Muddo seddex sano ayuu socday xiriirka jaceyl ee ka dhexeeyey labadaan lamaane balse markii dambe waxaa dhacday inay kala haraan waa markii deepika ay noqotay atariisho caan ah oo la wada yaqaan.
Waa Kuma Nihar?
Nihar Pandya waa aktar jilaa ah kaasi oo filimaan badan sameeyey , laga yaab inaad muuqaal ahaan u aragtay balse ma ahan caan sida Deepika ,waxaana kamid ah filimaanta uu sameeyey filimka ay kasoo wada muuqdeen isaga iyo Salman Khan ee Meri Gold.
2-Priyanka Chopra iyo Harman Baweja
Aktaradaan caanka ah ee Priyanka Chopra ayaa xiriir jaceyl la sameeysey Harman Baweja ,waxaa uu kamid yahay jilaayaasha ugu caansan Bollywood-ka.
Muuqaal ahaan waxaad ku aragtay filmaan badan , Love Story 2050 waa filimka ugu horeeyey ee jilaagaan uu keenay.
Balse labada jilaa waa ay kala boodeen markii ay noqdeen shaqsiyaad caan ah.
3-Kareena Kapoor and Hrithik Roshan
Jilaayaashaan waa laba jilaa caan ah , faafaahiin dheerna uma baahna ,waxaana ay kamid yihiin jilaayasha ugu caansan Bollywood-ka balse waxaa dhexmaray xiriir wada nolaansho ah.
Xiriirka Kareena Kapoor iyo Hrithik dhexmaray ma ahayn mid dheer balse waxaa la ogaaday inuu dhexmaray xiriir jaceyl.
4-Kangana Ranaut and Aditya Pancholi
Xiriirkaan jaceyl waxaa uu ahaa mid xanaf leh , sababtoo ah dagaal badan ayaa loo galay marka la fiiriyo qaabka uu ku socoday ,waxaana uu ahaa xiriir jaceyl oo qaabab kala duwan loo hagay.
Sheekada layaabka leh ayaa ahayd in Kangana ay xiriir jaceyl la sameeyso Aditya oo aad uga da’ weeynaa hadana sidaa o ay tahay waa ay isguursadeen.
5-Jacqueline Fernandez and Hassan Bin Rashid Al Khalifa
Xiriirka jaceyl oo ka socday dhanka Jacquelin hadana waxaad dareemeysaa in labada lamaane uu xiriir jaceyl dhexmaray.
Balse waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa KUMA Hassan Bin Rashid Al Khalifa?
Hassan Bin Rashid Al Khalifa waa shaqsi caan ah kana soo jeedo booqrtooyada Bahrien ,waxaana uu sidoo kale xiriir jaceyl la sameeyey gabadha Bollywoodka ee Jacueline Fernandez.
Admin 4 days ago	Lamaanaha, LOVE, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Bani’aadamka dabeecad ahaan waxa uu jecelyahay inuu sameeyo xiriirro bulsho oo wanaagsan, waxa uuna ku dadaalaa inuu mar kasta noqdo qof la jecelyahay oo dadka kale raalligeliya.
Waxaa jira dad aan ku jeclayn oo dadaal kasta oo aad raalligelintooda ku bixiso aaney ku filneyn, nacayb ay shakhsiyadaada necbyihiin darteed, laakiin hadana isku daya iney muujiyaan arrin ka duwan waxa ay qarsanayaan.
Sidaa darteed waxaan idiin soo gudbineynaa 4 calaamaood oo aad ku garan karto dadka ku neceb ee aan marnaba raalliga ka ahayn agjoogaaga.
4 calaamadood ee lagu garto ruuxa aan ku jeclayn
1 .Dhoollocaddeyn la’aan
Qof waxaa jira aad isku fiican tihiin laakiin maalin un xaaladdu ka xumaato mararka qaar, dhibaato gaar u haysata darteed, kaa maaha ka loola jeedaa. Qofka ku neceb waa qof marka uu dadka kale la joogo faraxad raynreyn u muujinaya marka uu ku arkana wejiga kuu bedelaya iskuna dayaya inuu si adag kuula hadlo indhahana aan ku siin karin, waa qofkaas qofka laga hadlayaa.
2 .Iska Dhaga-tirid
Mar kasta waxa uu isku dayayaa inuu ku ingiraad kugu sameeyo uu iska kaa dhaga-mariyo adigoon jirin oo kale uu kaa soo qaado, marka uu dadka kale oo dhan la hadlayo waxa uu u muujinayaa tixgelin, adiga waxa uu isku dayayaa inuu iska kaa dhaga-tiro, waxba aanuu kaa soo qaadin.
3 .Hadal Kooban
Waxa uu kugula dhaqmayaa habka soo koobista oo ma ogola inuu faahfaahin kula galo, erayada ugu badan ee uu isticmaalayo waa; hagaag; sax; maya, haa…sidaa darteed khabiir Philip, marka falcelinta qofka ay isku bedesho erayo kookooban waa arrin caddeyn u ah inuu qofkaasi ku jeclayn.
Marka aad aragto inuu qofku ku jirtiidadayo ee astaamaha uu jirkiisu bixinayaa aaney ku farxadgelinayn waxay u badan tahay in qofkaasi aanuu ku jeclayn, sida; inaanuu kusoo eegayn oo kale, xaaladda garbihiisa oo digtooni ka muuqato oo aan dabac saneyn, wejigiisa oo kaduud uu ka muuqdo.
Ugu dambeyn, arrinamaha waa waxyaabo ay dadka cillmiga bulshada bartay yaqaanaan, laakiin qofna ha dulmin, isku day inaad si wanaagsan qofka ula dhaqanto oo haddii aad aragto inuu ku necebyahay adiguna aadan la mid noqon ee aad ka roonaato jacayl kii hore ka badanna aad u muujiso, maxaayeelay Shaydaanka ayaa la diidayaa ineynu albaab u furno, markasta qofka wanaagsani dadka kale isagaa ka roonaada.